Waalidiinta oo ku soo noqday watooyinka Muqdisho si ay dalbadaan in dib loogu soo celiyo caruurtii loo qaaday Eritrea! | BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Waalidiinta oo ku soo noqday watooyinka Muqdisho si ay dalbadaan in dib...
Waalidiinta oo ku soo noqday watooyinka Muqdisho si ay dalbadaan in dib loogu soo celiyo caruurtii loo qaaday Eritrea!
Waalidiinta wiilashooda ay askaraysay Dowladda mudo xileedkeedu dhamaaday ee hoggaamiyo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta waxay mar kale banaanbax ka dhigeen isgoyska Lamber ee magaalada caasimada ah ee Muqdisho.
Iyada oo waalidiinta ay goobayaan wilashooda si qarsoodi ah tababarka loogu diray Eritrea, cutubyo kamid ah booliska Soomaaliya ayaa warbaahinta u diiday in ay kasoo waramaan mudaaharaadka.
Mudaharaadka ayaa imanaya iyada oo laga cabsi qabo in dagaalka gobolka Tigreey uu dib u qarxo ka dib markii Dowladda Itoobiya in ciidanka qaranka iyo Maleeshiyaad maxali ah u daadguraysay gobolka dagaaladu halakeeyeen ee Waqooyiga Itoobiya.
Dowladda Soomaaliya ayaa waxay dhowr jeer beenisay sheegashooyinka ah in ciidamada Soomaaliya ay ku lug lahaayeen dagaalkii Tigray ee Itoobiya ka qarxay sanadkii hore.
Hase ahaatee, maamulka Farmaajo ayaa ku guuldareystay in uu soo bandhigo caddeymo xoojinaya sheegashadiisa, taas oo walaaca ku xoojisay waalidiinta oo sheegay in muddo aysan la hadlin wiilashooda.
Nidaamka lagu qoray askarta Soomaalida ah ee tababarka loogu qaadey Eritrea ayaa ahaa mid kaliya ku koobnaa xafiiska madaxweynaha waqtiga dhamaaday, xukumaddii hore ee Ra’iisul wasaare Khayre iyo hay’adda NISA mana la marsiin hay’addaha kale ee dowladda sida ay sheegeen dhowr ilo wareed.
Xogaha ay bixiyeen ilo loo qaateen ah ayaa xusay in askarta loo qaadey Eritrea ay tiradoodu u dhaxeyso 5,000 illaa 7,000 isla markaana qaarkood ku nafwaayeen colaada gobolka waqoyga Ethiopia ku yaala ee Tigray oo loo daabulay.
Previous articleReal Madrid Oo Liverpool U Soo Bnadhigaysa Heshiis Isku Badalasho Ah Oo Ay Kaga Doonayso Mohamed Salah & Xiddiga Ay Liverpool Diyaarka Ul Tahay Oo La Logaaday
Next articleRW Rooble oo magacaabay Guddi nooc cusub ah oo qaabilsan qoondada haweenka ee Doorashada Dadban